China Ceramic Cyclone Lines agbakwunyere maka Ngwuputa factory na suppliers | YUNFENG
Efere Ceramic Na-agbakọta maka Ngwuputa
Efere akụkụ dị iche iche ahaziri dị ka ndị ahịa chọrọ * Uru: mmegide na-eguzogide, mmetụta na-eguzogide ọgwụ, nrụpụta na-adaba adaba, wdg, arụmọrụ ya na-eguzogide arụmọrụ yiri oge 260 nke nchara manganese, ígwè chrome, oge 170. Nwere ike ịmalite ogologo ndụ ọrụ nke iyi akụkụ. * Were ngwa ebe: Mpaghara nke ngwa: Mmanụ, Ngwuputa, igwe igwe, osisi ike na ulo oru ndi ozo di n'elu akụrụngwa ma ọ bụ ihe na-ebu l ...
Efere akụkụ dị iche iche ahaziri dịka ihe ndị ahịa chọrọ
* Uru: eyi -eguzogide, mmetụta na-eguzogide ọgwụ, adaba ewu, wdg, ya usoro iwu na-eyi-eguzogide arụmọrụ bụ Ẹkot 260 ugboro nke manganese ígwè, chrome ígwè, 170 ugboro. Nwere ike ịmalite ogologo ndụ ọrụ nke iyi akụkụ.
The Nchikota akwa rigidity nke seramiiki na elu ekwedo nke ígwè na-enye ọkpọkọ unmatchable atụmatụ dị ka ihe abrasion eguzogide ọgwụ, okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ na corrosion eguzogide ọgwụ ihe maka ojiji na ubi nke ike ọgbọ, nkà mmụta banyere ígwè, Ngwuputa, na chemical ụlọ ọrụ wdg. O nwere ọtụtụ uru karịa ọkpọkọ ígwè, ọkpọkọ nkume, na ọkpọkọ ígwè-plastik.
Njirimara nke alumina seramiiki liner tube:
Akwa eyi eguzogide
1. Efere na-eguzogide mgbochi karịa 10 ugboro na nchara.
2. Oke akwa na-eguzogide oyi akwa. (Dị ka onye ọrụ chọrọ dịkwuo ma ọ bụ ibelata eyi oyi akwa 6mm-9mm)
1. The ojiji nke mgbochi awụfu taịl nile, taịl nile n'etiti Ọdịdị nke mgbali bụ atọ n'akụkụ ibe enwe steeti.
2. Ọfụfụ dị gburugburu nwere 4-6 siri ike ịghasa, banye na taịl nile nke oghere dị n'etiti cone, jikọtara ya na mgbidi mpụta nke ọkpọkọ ígwè.
Ngwongwo ndị a na-edozi seramiiki dị ọkụ karịa ọkpọkọ alloy, ọkpọkọ ígwè na nkedo nkume nke na-ebelata ego nke njem ma mee ka ọkpọkọ dị mfe.
Nkwado dị mfe
The seramiiki-agbakọta ígwè mejupụtara ọkpọkọ nwere ike mfe jikọọ site ịgbado ọkụ ma ọ bụ na flanges na adụ mfe njikọta.
Nha 1200 (L) * 1000 (W) * 800 (D) Nkeji
Ibu ibu 0.5T
Ngwungwu nkịtị bụ igbe osisi (Size: L * W * H). Ọ bụrụ na mbupụ gaa na mba Europe, igbe osisi ahụ ga-abụ nke fumigated.
Nha 1200 (L) * 1000 (Nke) * 800 (H)
Ibu ibu 1.2 T
Nke gara aga: Rubber seramiiki mejupụtara liner na alumina seramiiki taịl na eke roba
Osote: 95% Alumina Ceramic Lining & Steel Pipeline Kpọtụrụ Site na Factlọ Ọrụ China